Tesalonikafo Nhoma a Ɛto So Abien 3:1-18
Monkɔ so mmɔ mpae (1-5)
Wɔn a wɔnenam basabasa no, bɔ wɔn kɔkɔ (6-15)
Nkyia a etwa to (16-18)
3 Afei anuanom, monkɔ so mmɔ mpae mma yɛn,+ na ama Yehowa* asɛm akɔ so atrɛw ntɛmntɛm,+ na wɔahyɛ n’asɛm no anuonyam, sɛnea moreyɛ no. 2 Afei nso, mommɔ mpae mma yɛn na wɔagye yɛn afi amumɔyɛfo ne abɔnefo nsam,+ efisɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔwɔ gyidi.+ 3 Nanso Awurade yɛ ɔnokwafo, na ɔbɛhyɛ mo den, na wabɔ mo ho ban afi ɔbɔnefo no ho. 4 Bio nso, yɛwɔ mo mu ahotoso wɔ Awurade mu sɛ akwankyerɛ a yɛde ma mo no, mode reyɛ adwuma na mobɛkɔ so de ayɛ adwuma. 5 Awurade nkɔ so nkyerɛ mo koma kwan yiye nkɔ Onyankopɔn dɔ+ ho, na ɔmma mummia mo ani,+ Kristo nti. 6 Afei anuanom, yɛrema mo akwankyerɛ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu sɛ, onua biara a ɔnenam basabasa na onni nsɛm* a mote* fii yɛn nkyɛn no+ so no, montwe mo ho mfi ne ho.+ 7 Na mo ara munim sɛnea ɛsɛ sɛ musuasua yɛn,+ efisɛ yɛammɔ yɛn bra basabasa wɔ mo mu, 8 na saa ara nso na yɛanni obiara aduan kwa.*+ Mmom yebirii yɛn mogya ani yɛɛ adwumaden awia ne anadwo, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa ɛka kɛse biara nto mo mu biara so.+ 9 Ɛnyɛ sɛ yenni tumi+ sɛ yegye biribi fi mo hɔ, na mmom na yɛpɛ sɛ yɛde yɛn ho yɛ nhwɛso ma mo na musuasua yɛn.+ 10 Nokwarem no, bere a yɛwɔ mo nkyɛn no, na yɛtaa de ahyɛde yi ma mo sɛ: “Sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a, mma onnnidi nso.”+ 11 Na yɛate sɛ ebinom nenam basabasa wɔ mo mu+ a wɔnyɛ adwuma koraa, na nsɛm a ɛmfa wɔn ho na wɔde wɔn ano to mu.+ 12 Saa nnipa no, yɛhyɛ wɔn, na yetu wɔn fo wɔ Awurade Yesu Kristo mu sɛ, wɔnyɛ komm nyɛ adwuma na wonni aduan a wɔn ankasa abrɛ anya.+ 13 Anuanom, mo de, mommmrɛ papayɛ mu. 14 Na sɛ obi antie yɛn asɛm a ɛwɔ krataa yi mu a, monhyɛ onii no nsow, mo ne no mmmɔ+ na ama n’ani awu. 15 Nanso mummmu no sɛ ɔtamfo, na mmom monkɔ so ntu no fo+ sɛ onua. 16 Na asomdwoe Wura no ankasa mma mo asomdwoe daa wɔ akwan nyinaa mu.+ Awurade ne mo nyinaa ntena. 17 Me Paul, me nkyia a mede m’ankasa me nsa kyerɛwee+ ni. Ɛyɛ ahyɛnsode wɔ me krataa biara mu; sɛɛ na mekyerɛw. 18 Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔte.”
^ Anaa “yɛanni obiara aduan a yɛantua ka.”